अतिले खति : कुकुरलाई अति माया गर्दा जिन्दगी बर्बाद – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > अतिले खति : कुकुरलाई अति माया गर्दा जिन्दगी बर्बाद
admin September 22, 2020 September 23, 2020 जीवनशैली	0
तिले खति ! यो उखान एउटा घटनासँग चरितार्थ भएको छ । कुकुरलाई धेरै माया गर्दा एक व्यक्तिले निकै महंगो मुल्य चुकाउनु परेको छ । उनको जीवन नै बर्बाद भएको छ । ४८ वर्षका ग्रैग मोन्टेउफुलले कुकुरले एक पटक चाट्दा महंगो मुल्य चुकाउन परेको हो । कुकुरलाई चाट्ने क्रममा खतरनाक ब्यक्टीरिया ग्रेगको रगतमा सरेर तिव्ररुपमा शरीरमा फैलिएको थियो । पछि खुट्टा नै काट्न परेको थियो ।
उनले जिन्दगीको धेरै समय कुकुरसँग बिताएका थिए । ग्रेगले कुकुरलाई निकै माया गर्थे । तर उनको माया नै उनको दुखको कारण भयो । उनले कुकुर चाट्दा इन्फेक्शन भएको हो ।
ग्रेगको रगतमा ब्याक्टेरिया पुग्यो र ब्लड प्रेसर कम भयो र शरीरमा त्यसको असर सिधै पर्यो । एक पटक शरीरमा ब्लड प्रेसर कम हुँदा अचानक हात र खुट्टाले काम गर्न छाडेको थियो । हाल उनको खुट्टा काटिएको छ । शरीरमा संक्राण फैलन सक्ने भएकोले नफैलनको लागि उनका दुवै खुट्टा काटिएका छन् ।
पीपीई सेटमा आएका चिनियाँ सेना माइकिङ गर्दै यस्तो भने
सुर्खेत । हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनका लागि गएको नेपाली टोलीसामू चिनियाँ पक्षले लाप्चा बगरमा नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको खबर आएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो । टोलीसँगै गएका नाम्खा गाउँपालिका, हुम्लाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङका अनुसार चिनियाँ पक्षले आफ्नै भूमि भएको दाबी गरेको छ ।
अनसनरत डा. केसी माथिकाे ज बरज स्तीपछि गगन थापा आ क्रोशित, सरकारले पतनकाे बाटो खोज्यो!